भाषा आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिने... :: सुजिता कार्की :: Setopati
भाषा आयोगलाई छिट्टै पूर्णता दिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाषा आयोगलाई अब छिट्टै पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले आयोगलाई पूर्णता दिने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री देउवा त्यसलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
भेटको क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आयोगलाई पूर्णता दिन सरकार तयार रहेको बताए । त्यस अवसरमा आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले आयोगलाई पूर्णता नदिएकै कारण जिम्मेवारी अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे। आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाई नगर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले जानकारी दिए ।
आयोगले भाषा आयोगको ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेकोतर्फ पनि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले संसदमा ऐन निर्माणका लागि विधेयक पेश गरिएको भएपनि त्यसलाई पारित गराउन सरकार र संसद दुवै अग्रसर नभएको गुनासो गरे ।
त्यस अवसरमा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, लोपोन्मुख भाषाहरूको संरक्षणका लागि तत्काल उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने लगायतका सुझावसहितको आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको छ ।
सरकारले एक वर्ष अघि केन्द्र र प्रदेशहरूको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण, भाषा र लिपीको संरक्षण लगायतको काम गर्ने कार्यादेशसहित अवस्थीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगलाई भाषासम्बन्धि सम्पूर्ण निर्णय लिने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ २३, २०७४, ०२:१६:०४